UMFUNDI OPHUMELELE ISIDANGA SASESTANFORD, UMKHWELI WAMATYE OKHUTHELEYO UWELA EKUFENI-IINDABA ZEMERCURY - IINDABA
Umfundi ophumelele isidanga saseStanford, umkhweli wamatye okhutheleyo uwa wafa
Ngezidanga zobunjineli kunye nesayensi yebhayoloji esele isesandleni kwaye sisebenzela isidanga sobugqirha kwisayensi yezopolitiko, umfundi ophumelele kwiYunivesithi yaseStanford uChris Chan wayegcwele imephu xa kufikwa kwizinto ezinomdla, umhlobo wakhe uthe ngoLwesibini.
Kodwa inye into awayeyazi ngokuqinisekileyo kukuba wayekuthanda ukukhwela, wongeza uJim Castelaz.
U-Chan, oneminyaka engama-31, usweleke ngoLwesihlanu emva kwemini esenza into ayithandayo- enyusa udonga olukhulu lwamatye. Owayesakuba ngumongameli weqela laseStanford Alpine wawa ekufeni ngelixa wayesihla e-Eichorn Pinnacle eYosemite National Park.
Abameli beNkonzo yePaki yeSizwe baqinisekisile ngoLwesibini ukuba u-Chan wayekhwela yedwa simahla ngaphandle kweentambo okanye izixhobo xa etyibilika waza wawa malunga neemitha ezingama-300 malunga ne-1: 30 p.m. Akwaziwa ukuba watyibela ntoni.
Abahlobo bathi uChan wakhulela eAtlanta. Ngokutsho kwewebhusayithi kaChan, wafumana isidanga se-bachelor kwisayensi ye-biochemical kwiYunivesithi yaseHarvard kwi-2000, isidanga se-master kubunjineli boluntu kunye nendalo evela eStanford ngo-2008, kwaye wayeqhuba isidanga sobugqirha kwisayensi yezopolitiko eStanford. Ngaphambi kokuza eStanford, waya kwisikolo esithweswe isidanga soBudlelwane baMazwe ngaMazwe kunye nePasifiki kwiDyunivesithi yaseCalifornia, eSan Diego, ngokwewebhusayithi yakhe. Wayenomdla kumgaqo-nkqubo wendalo kunye nezopolitiko zaseTshayina.
Umcebisi kaChan kagqirha eStanford, uJean Oi, uthe uChan wayesele eza kuqalisa uphando kwinkcazo yakhe ngezopolitiko ezijikeleze ukwamkelwa kobuchwephesha bendalo eTshayina. UChan wayechithe unyaka ophelileyo eTshayina, efunda ulwimi, kwaye wayezimisele ukubuyela kunyaka olandelayo wesikolo ukuze aqalise uphando.
UChris wayengumntu okhethekileyo kwizinto ezininzi, u-Oi wabhala nge-imeyile evela eHong Kong. Bendijonge phambili ekusebenzeni naye dissertation yakhe. … Wayenetalente yezemfundo eninzi. Kwakhona wayengumntu onobubele nonesisa. Ndiza kumkhumbula kakhulu.
UCastelaz uthe uyaqhubeka nokufunda ngakumbi ngobomi bukaChan njengoko abahlobo besabelana ngeenkumbulo zabo. Wathi usanda kufunda, umzekelo, ukuba wayedlala ivayolin kunye nepiyano.
Wayesoloko ezele zizinto ezothusayo, utshilo uCastelaz. Wayekwazi ukuthetha ngobulumko ngawo nawuphi na umbandela.
Kodwa wayephilela ukukhwela amatye.
Akukho bukho endibuthanda ngaphezu kwexesha elichithwe kubuso begranite, utshilo iwebhusayithi kaChan.
Wayengumkhweli onamava kwaye wafundisa ukunyuka kwamatye kwi-Alpine Club kunye neNkqubo yeMfundo yangaphandle yaseStanford. UCastelaz uthe esinye sezizathu zokuba akhethe iStanford kusenokwenzeka ukuba yayikufutshane neYosemite. Ngexesha lasehlotyeni, wathi, wayehlala apho.
UChris McGuinness, umongameli we-Stanford Alpine Club kunye no-Chan wangaphambili ohlala naye, wathi uChan wayethanda ukwabelana nabanye ngolwazi lwakhe lokunyuka. Wayekhuthaza kakhulu kwaye uthando lwakhe lobomi luchaphazele abanye, utshilo uMcGuinness. Wayesoloko, esoloko encumile. Wayengomnye wabo bantu babebonakalisa ulonwabo ebomini kwaye ethanda izinto. Ukuba kufutshane naye awukwazanga ukuzibamba kodwa ube nemincili.
NgoLwesihlanu, uChan wadibana noCastelaz kunye nabanye abakhweli eYosemite. Okokuqala, benyuka iCathedral Peak, intaba eziimitha ezili-10,900 ezijonge eTenaya Lake, emva koko yena kunye noCastelaz basinga e-Eichorn Pinnacle, ephuma ecaleni kweCathedral. Ngomkhweli wamava kaChan, u-Eichorn wayelula kakhulu, utshilo uCastelaz.
Baye bafikelela phezulu, banandipha umbono kwaye bathetha ngokunyuka, uCastelaz uthe kwiposti ye-Facebook echaza ukunyuka. Emva koko babuyela ezantsi. UCastelaz uthe wayemalunga neemitha ezingama-20 ngaphezulu kwakhe xa weva ingxolo waza wajika wambona esiwa.
Andazi ukuba kwenzeke ntoni okanye kutheni ephumile, uCastelaz wabhala kwiposti kaFacebook. Ndambona esiwa. Ndothuke ndoyika ndingenakwenza nto. Yayilelona xesha libi ebomini bam. Naphi na apho wafikayo ekugqibeleni, ndandingasaboni.
Wakhwaza abakhweli ababini ababekufutshane ukuba bacele uncedo waza wabaleka wehla entabeni. Inqwelo-moya yamfumana uChan, kwaye abahlanguli baxelela uCastelaz ukuba akasindanga.
Abo bamaziyo (uChris), bayazi ukuba akazukuxolisa ngokunyuka, nangoku, uCastelaz ubhale kuFacebook. Ndiziva ndinethamsanqa kwaye ndinombulelo ngemini emnandi esasinayo kunye. Yinto endiya kuhlala ndiyibambe ngokusondeleyo entliziyweni yam. Akukho mntu ukhetha ixesha okanye indawo apho aya khona, kwaye uChris waya ngelixa esenza into ayithandayo kwindawo ayithandayo.
Inkonzo yesikhumbuzo icwangciselwe ukuba ngeCawa, ukusuka ngentsimbi yoku-1 ukuya kweyesi-3 emva kwemini, eStanford Memorial Church.
I-imeyile uDiana Samuels e dsamuels@dailynewsgroup.com .